एकमुठो सागको ८० रुपैयाँ ! दशैमा मासु किन्न कसले सक्ने ? – POKHARA TOURISM NEWS
HomeNepalएकमुठो सागको ८० रुपैयाँ ! दशैमा मासु किन्न कसले सक्ने ?
एकमुठो सागको ८० रुपैयाँ ! दशैमा मासु किन्न कसले सक्ने ?
October 7, 2019 Rohit Basnet Nepal 0
असोज २० बुटवल ः
दशैं भनेको मासु र तिहार भनेको रोटीको चाड भनिन्छ ।
पहिले मजाले मासु खान दशैं कुर्नुपर्थ्यो । दशैं कहिले आउला भनेर औंला गन्दै बस्थे मानिसहरु । अहिले त मीठो खान, राम्रो लाउन चाडबाड कुर्न नपर्ने भयो । अहिले हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति, चाडपर्व सबै कुरामा मानिसहरु पीडित छन् ।
अहिले कतै चाडबाडको रौनक नै देख्दिनँ दशैं आउन लाग्दा मानिस चंगा उडाउँथे, अनेक खेलकुद हुन्थ्यो । नाचगान र सांस्कृतिक कार्यक्रमको छुट्टै रौनक हुन्थ्यो, दशैंका बेला खानपिन, नाचगान मात्र होइन, विविध सांस्कृतिक पक्षको विषेश रमाइलो हुन्थ्यो तर अहिले मनोरञ्जनको नाममा कोलाहल मात्रै छ ।
पहिलेका मानिसमा धर्म थियो, अहिलेका मानिसमा छैन । यो गर्न हुन्छ, यो हुन्न भन्ने छँदै छैन । पहिले नपढेको मानिस पनि विवेकी थिए । अहिलेका मानिस बाहिर सुकिला, भित्र फोहर भए । यो पुँजीवादमा यस्तै हुने हो कि ?
पहिला दशैंमा दक्षिणाको खासै चलन थिएन । कोही दक्षिणाको लोभले टीका लाउन जाँदैन थिए । अहिले त दक्षिणाको हिसाब हुने गर्छ । ससुराले यति दिए, मामाले यति दिए दक्षिणा कम दिए भने छुचा, लुच्चा रहेछन आदी कुरा हुन्छ । तर संस्कृती नबुझेकालाई पनि यहाँको जीवन रमाइलै हुन्छ । चाडबाडले मानिसहरुलाई संस्कृतीमा भिज्न सहयोग गर्छ ।
अहिले त जताततै केवल महंगी । एकमुठो साग किन्न ८० रुपैयाँ पर्छ । मासु किन्न कसले सक्ने ? शासन व्यवस्था फेरिएपछि त हामीले त्यही अनुसार सुविधा भोग गर्न पाउनु पर्ने हो, तर खै रु गरिबले कसरी दशै मान्लान् ?
चाडबाड चाडबाड जस्ता रहेनन्, जताततै खपिनसक्नुको महंगी छाएको छ । मानिसहरुले कसरी किनेर खान सक्लान् रु गरिबले दशैं कसरी मनाउलान् ?
यही कुरामा दुः खी हुने म जस्ता मानिस यो देशमामा धेरै छन् । तर त्यसको मुल्याङ्कन कसले गर्ने ?